ဇာတ်လမ်းတို – Media9
ဇာတ်လမ်းတို ဗွီဒီယို အနုပညာ
Take Care of your parents when they are alive…
[Unicode] မိဘတွေသက်ရှိထင်ရှားရှိနေစဉ်မှာ ဂရုစိုက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ [Zawgyi] မိဘေတြသက္ရွိထင္ရွားရွိေနစဥ္မွာ ဂရုစိုက္ဖိဳ႕မေမ့ပါနဲ႕
ဆယ်လီ ဇာတ်လမ်းတို ဗွီဒီယို လူမှုဘဝ အနုပညာ
December 17, 2019 media9Comment(0)
[Unicode] ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောရန် မမေ့ပါနှင့် Every Thank you bringasmile.. Don’t forget to say Thank You. [Zawgyi] ကေ်းဇူးတင်ကြောင်း ေျပာရန် မေမ့ပါနွင့် Every Thank you bringasmile.. Don’t forget to say Thank You.
[Unicode] အကြံကောင်းတော့တချက် ဟာသဇာတ်လမ်းတို ဇာတ်လမ်း – ဇော်မျိုးလှိုင် ဇာတ်ညွှန်း နှင့် ဒါရိုက်တာ – အောင်လင်းနိုင်(Media9) သရုပ်ဆောင် – မင်းခန့်ကို ၊ လင်းရံ ၊ နေသွေးသစ် ၊အိမြတ် ကင်မရာ – ငြိမ်းချမ်း ၊ ရဲသူဟိန်း တည်းဖြတ် – ထိန်လင်းအောင် (Media9) ဟာသဇာတ်လမ်းတိုလေးတွေကြည့်ပြီးခွီချင်တယ်ဆိုရင် media9 facebook page ကို Like လုပ်ထားပြီး media9 youtube channel ကိုပါ Like & Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်။ [Zawgyi] အၾကံေကာင္းေတာ့တခ်က္ ဟာသဇာတ္လမ္းတို ဇာတ္လမ္း – ေဇာ္မ်ိဳးလွိုင္ ဇာတ္ညႊန္း ႏွင့္ ဒါရိုက္တာ – ေအာင္လင္းနိုင္(Media9) […]
ဆယ်လီ ဇာတ်လမ်းတို ဗွီဒီယို ရုပ်ရှင် အနုပညာ
” မှောင်တိုက် “ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမယ့်’ဇင်မျိုး’
[Unicode] ” မှောင်တိုက် “ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမယ့်’ဇင်မျိုး’ “ကျွန်တော့်ရဲ့အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျောက်မှာ ညီလေးတွေလည်း လက်တွဲခေါ်ဖူးတယ်။ဒီအလုပ်က ဘဝမှာ မသေချာ၊မရေရာဘူးလေ။လမ်းတစ်ဝက်မှာပဲ လမ်းစပျောက်သွားမှာစိုးတယ်”ဆိုတဲ့ ” မှောင်တိုက် “ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမယ့်’ဇင်မျိုး’ [Zawgyi] ” ေမွာင္တိုက္ “႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးမွာ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္သြားမယ့္’ဇင္မ်ိဳး’ “ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕အႏုပညာသက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္မွာ ညီေလးေတြလည္း လက္တြဲေခၚဖူးတယ္။ဒီအလုပ္က ဘဝမွာ မေသခ်ာ၊မေရရာဘူးေလ။လမ္းတစ္ဝက္မွာပဲ လမ္းစေပ်ာက္သြားမွာစိုးတယ္”ဆိုတဲ့ ” ေမွာင္တိုက္ “႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးမွာ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္သြားမယ့္’ဇင္မ်ိဳး’
ဇာတ်လမ်းတို ဗွီဒီယို ဟာသ အနုပညာ
August 7, 2019 August 7, 2019 media9Comment(0)
[Unicode] Black & White ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ကိုရှမ်း ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ ဒါရိုက်တာ – ရဲရင့်သစ္စာက ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားပြီး သရုပ်ဆောင် – စစ်နိုင်၊ခိုင်သဇင်၊စွမ်းယု၊လိပ်မ၊ချစ်စုစုဟန် တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုလေးဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုဇာတ်လမ်းတိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ Media9ရဲ့ Facebook page ကို like ၊ Share ၊ Comment လေးတွေပြုလုပ်ပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ နော်….. [Zawgyi] Black & White ရဲ႕ ဇာတ္လမ္းကို ကိုရွမ္း ဇာတ္ညႊန္းေရးသားကာ ဒါရိုက္တာ – ရဲရင့္သစၥာက ရိုက္ကူးပံုေဖာ္ထားျပီး သရုပ္ေဆာင္ – စစ္ႏုိင္၊ခိုင္သဇင္၊စြမ္းယု၊လိပ္မ၊ခ်စ္စုစုဟန္ တို႔ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းတိုေလးျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုဇာတ္လမ္းတိုေလးေတြကိုၾကိဳက္ႏွစ္သက္တယ္ဆိုရင္ေတာ့လူၾကီးမင္းတို႔အေနနဲ႔ Media9[…]
July 22, 2019 July 22, 2019 media9Comment(0)
[Unicode] Media9မှတင်ဆက်သော ဒါရိုက်တာ – ရဲရင့်သစ္စာ ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားပြီး သရုပ်ဆောင် – ထူးမြတ်၊အေးသန္တာလင်း၊ငြိမ်းစုဝေ၊မင်းဇော်လေး တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုလေးဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုဇာတ်လမ်းတိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ Media9ရဲ့ Facebook page ကို like ၊ Share ၊ Comment ၊ လေးတွေပြုလုပ်ပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ နော်….. [Zawgyi] Media9မွတင္ဆက္ေသာ ဒါ႐ိုက္တာ – ရဲရင့္သစၥာ ႐ိုက္ကူးပုံေဖာ္ထားၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္ – ထူးျမတ္၊ေအးသႏၲာလင္း၊ၿငိမ္းစုေဝ၊မင္းေဇာ္ေလး တို႔ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းတိုေလးျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုဇာတ္လမ္းတိုေလးေတြကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္တယ္ဆိုရင္ေတာ့လူႀကီးမင္းတို႔အေနနဲ႔ Media9ရဲ႕ Facebook page ကို like ၊ Share ၊ Comment ၊ […]